“1 Billion Views” album နဲ့ ပရိသတ်တွေဆီ ပြန်လာမယ့် EXO-SC | News Bar Myanmar
ယနေ့ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာတော့ SM Entertainment က EXO ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ EXO-SC ( Sehun နဲ့ Chanyeol) တို့ဟာပရိသတ်တွေဆီကို သီချင်းသစ်တွေနဲ့ ပြန်လာတော့မယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
Album အသစ် ကတော့ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု Album အသစ်ကတော့ EXO-SC ရဲ့ ပထမဆုံး Full Album လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ရှိမယ့် Album အသစ်ရဲ့ နာမည်ကတော့ “1 Billion Views” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ album မှာတော့ ရသအမျိုးမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် သီချင်း ၉ ပုဒ် ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး Chanyeol နဲ့ Sehun တို့ရဲ့ သူမတူတဲ့ ပုံစံတွေကို တဝကြီး ခံစားနားဆင်နိုင်မှာပါ။
နောက်ထပ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ သတင်းကတော့ Million Market ရဲ့ အဆိုတော် MOON ကလည်း ယခု album ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ ပါဝင်သီဆိုသွားမှာပါတဲ့။ လက်ရှိမှာတော့ Chanyeol နဲ့ Sehun တို့ဟာ ဂီတ၊ သရုပ်ဆောင်မှု၊ ဖက်ရှင် စတဲ့ နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေတာပါ။
သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ Album သစ်ကို ချပြမလဲဆိုတာကတော့ ရင်ခုန်စရာပါပဲ။ EXO-SC ရဲ့ ပထမဆုံး Full Album ဖြစ်တဲ့ ” 1 Billion Views” ကို ယနေ့ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ကစလို့ ကြိုတင် မှာယူလို့ ရနေပါပီတဲ့နော်။ EXO-L လေးတို့ရေ Chanyeol နဲ့ Sehun တို့ကို အားပေးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြပီလား… ?
(Zawgyi) “1 Billion Views” album နဲ႔ ပရိသတ္ေတြဆီ ျပန္လာမယ့္ EXO-SC
ယေန႔ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွာေတာ့ SM Entertainment က EXO ရဲ့ unit ျဖစ္တဲ့ EXO-SC ( Sehun နဲ႔ Chanyeol) တို႔ဟာပရိသတ္ေတြဆီကို သီခ်င္းသစ္ေတြနဲ႔ ျပန္လာေတာ့မယ္လို႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။
Album အသစ္ ကေတာ့ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ထြက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု Album အသစ္ကေတာ့ EXO-SC ရဲ့ ပထမဆုံး Full Album လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္ရွိမယ့္ Album အသစ္ရဲ့ နာမည္ကေတာ့ “1 Billion Views” ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ album မွာေတာ့ ရသအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပးစြမ္းနိုင္မယ့္ သီခ်င္း ၉ ပုဒ္ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ၿပီး Chanyeol နဲ႔ Sehun တို႔ရဲ့ သူမတူတဲ့ ပုံစံေတြကို တဝႀကီး ခံစားနားဆင္နိုင္မွာပါ။
ေနာက္ထပ္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ သတင္းကေတာ့ Million Market ရဲ့ အဆိုေတာ္ MOON ကလည္း ယခု album ရဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္မွာ ပါဝင္သီဆိုသြားမွာပါတဲ့။ လက္ရွိမွာေတာ့ Chanyeol နဲ႔ Sehun တို႔ဟာ ဂီတ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈ၊ ဖက္ရွင္ စတဲ့ နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိေနတာပါ။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္လိုပုံစံေတြနဲ႔ Album သစ္ကို ခ်ျပမလဲဆိုတာကေတာ့ ရင္ခုန္စရာပါပဲ။ EXO-SC ရဲ့ ပထမဆုံး Full Album ျဖစ္တဲ့ ” 1 Billion Views” ကို ယေန႔ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကစလို႔ ႀကိဳတင္ မွာယူလို႔ ရေနပါပီတဲ့ေနာ္။ EXO-L ေလးတို႔ေရ Chanyeol နဲ႔ Sehun တို႔ကို အားေပးဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၾကပီလား?
Written :Gyi Gyi
Next ဂင်းနစ် စံချိန်တင်ထားတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင် ၉ ယောက် »
Previous « 2PM အဖွဲ့ဝင် Taecyeon ဟာ ချစ်သူရနေပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ပြောကြလိုက်ပါပြီ